Synergy: Vashambadziri Vanokudziridza Nayo Midhiya Neyakabhadharwa uye Inobhadharwa Midhiya ine Varidzi | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 18, 2017 Chipiri, January 12, 2021 John Koetsier
Kurapa kushambadzira kwakabhadharwa uye kushambadzira kwevaridzi zvakasiyana kunoshandura vashanduri, chinzvimbo uye mari. Vazhinji vatengesi vanoongorora chiteshi zvakasiyana, kana, kupatsanurwa kwakabhadharwa, kupihwa, uye kushambadzira kwavo.
Iwe unosiya 50-100% yezvaunogona kuwana patafura.
Ini ndangobva kubvunza angangoita zana zana maCMO nevatungamiriri vekutengesa: Ko organic uye yakabhadharwa kushambadzira inokanganisa sei uye inosimudzirana? Yavo mhinduro vaishamisa nekushamisa, uye vachipa humbowo hwakasimba hwekuti vashambadziri vanofanirwa kutsvaga nekushandisa synergies kwete chete mukati asi zvese pakati penzira dzadzo dzese dzekutengesa.
Zvemagariro muenzaniso uri pachena.
Mazhinji mabrisi muto wehupenyu hwemagariro nekabhadharwa zvishoma. Asi vamwe vatengesi vanoona kuti mabhenefiti anowedzera zvakapfuura zvirinani zvemagariro midhiya mhedzisiro. Semuenzaniso, pamwe… kune organic yekushambadzira kushambadzira.
Isu takaparura Facebook Ad mushandirapamwe wekusimudzira yemahara rwendo rwunopihwa. Izvi zvakakonzera zviuru zveanofarira, masheya, maTweets uye angangoita makumi mashanu maratidziro akapinda kubva kumablog ekufamba. Yedu organic yekutsvaga traffic yakavandudzwa ne50% mukati memwedzi yakati wandei nekuti magariro masocial uye inbound zvinongedzo ndizvo zvikuru zvinzvimbo zvinhu muGoogle algorithm. Amine Rahal, muvambi uye CEO we Little Dragon Media
Mune mamwe mazwi, yakabhadharwa zvemagariro yakatungamira kune yakawanikwa yemagariro yakatungamirwa kune yakawanikwa SEO yakatungamirwa kune yavo yewebhu traffic.
Iyo yakanaka cheni ye causation, kana iwe uri mushambadzi uine shoma bhajeti.
Mumwe muenzaniso? Bhadhara-per-tinya kune organic SEO.
Izvo chete zvekuti iwe uri kutyaira yakawedzera traffic kune yako webhu zvivakwa ine yakanaka yakazara yakazara maitiro.
Paavhareji, isu taona gumi kusvika 10% inosimudzwa mune organic yekutsvaga traffic kwemazwi akakosha uye zvirevo uko kushambadza kunoiswawo, kunyanya kutenderedza kutsva kwakatsvaga. Izvo kushambadzira zvakare zvinodhura kwazvo uye zvinoita nemazvo, sezvo zviri iwo mutengo wepasi. Kent Lewis, muvambi uye Mutungamiri weAnvil
Nei izvi zvichishanda?
Laura Simis weCoalmarch anoti sezvo peji traffic iri chinhu mune yekutsvaga injini mhedzisiro peji chinzvimbo, kuwedzera traffic kune rimwe peji kuburikidza neinobhadharwa midhiya kunogona kusimudzira iro peji kugona kugona zvakanaka.
Saka, nderupi rudzi rwekusimudza iwe rwaunogona kuburitsa kubva kune iyi nzira yekubatanidza SEM nePPC? Vatengesi vandakaongorora vakati mhedzisiro yavo yakatarisana kubva pagumi kusvika pa10% yekusimudza. Izvo zvinogona kunge zvisiri kupwanya pasi ... asi zviri pachena mahara.
Mumwe unofadza muenzaniso: organic SEO uye yakabhadharwa Google kushambadzira kushambadzira.
Izvi zvakakonzera kuwedzera kukuru kwe7X mumari yemutengesi mumwe.
Alison Garrison, director mukuru wekushambadzira ku Volusion, ecommerce chikuva cheSMBs, yakawona yakareba gumi nemaviri 'kukosha kwe organic organic injini yekugadzirisa yakarova pay pay paakawedzera Google Shopping ads.
Mushure mekutanga mushandirapamwe wekutenga zvekudya, iro SEO basa ranga richienda kwerinenge gore rakawana traction yakakura, uye traffic kubva ku organic search yakawedzera 325% yakazara uye inopfuura 400% kubva kune nhare yega gore-pamusoro-gore. Alison Garrison
Asi mari zvachose akasvetuka kuburikidza denga uyewo… kusanganisira makemikari kutsvaka kwemari.
Mari inowanikwa kubva ku organic search yakawedzera ne240% panguva iyoyo. Zvitoro zvekutengesa zvekushambadzira zvaive zvakakosha pakubudirira pano - traffic yakazara yakawedzera neinopfuura 2,500%, traffic traffic yakawedzera neinopfuura 10,000%, mari yakawedzera neinopfuura 800%, mari yemafoni yakawedzera neinopfuura 80,000% - kwete typo.
Zviripachena, mutengi wake anga achitanga kubva padiki diki rewebhu uye nharembozha. Uye, kune mamwe maviri akakosha mapako. Imwe: akaisa mari izere gore mukutsvaga injini optimization. Iko kuzvipira uye kuyedza - uye maonero erefu - ayo ausingawanzo kuwona. Uye maviri: mileage yako inogona kusiyana. Kungoita kuti mumwe mushambadzi anovavarira kumwedzi uye achirova nyeredzi hazvireve kuti mushambadzi wese anowana mhedzisiro yakafanana.
Zvakadaro, mhedzisiro yacho inoshamisa.
Uye, zvirinani, zvawanikwa naGarrison zvinoratidza kudikanwa kwekubatana pakati penzira dzekutengesa. Vashambadziri vasingatsvake uye kushandisa zvisirizvo pakati penzira dzakabhadharwa uye dzekutengesa dzega vari kurasikirwa negoridhe chairo.
Chidzidzo chakazara nemaonero kubva kune vese vatengesi vandakataura navo anowanikwa mahara pano.
Dhawunirodha Chidzidzo Chizere Pano
Tags: Alison Garrisonallison garrisonanvilcoalmarchKent Lewislaura simisMarketingkushambadzira chiteshiomnichannelorganic midhiyaorganic searchorganic seonhepfenyurovanobhadharwa midhiyayakabhadharwa kutsvagappcvolusion